Factory Generator, mpamatsy - Mpanamboatra Generator China
Cummins Inc., mpitarika herinaratra manerantany, dia orinasam-pandraharahana mifameno izay mamolavola, manamboatra, mizara ary manompo ny motera sy ny teknolojia mifandraika amin'izany, ao anatin'izany ny rafitra solika, fanaraha-maso, fikirakirana ny rivotra, filtration, vahaolana momba ny famoahana ary rafitra famokarana herinaratra elektrika. Ny foiben-toerany any Columbus, Indiana (Etazonia), i Cummins dia manompo mpanjifa amin'ny firenena sy faritany 190 eo ho eo amin'ny alàlan'ny tambajotran-tserasera misy toerana misy mpizara 500 sy tsy miankina ary toerana fivarotana 5.200 eo ho eo.
Nandritra ny 80 taona mahery, UK Perkins no mpamatsy lasantsy diesel sy lasantsy manerantany amin'ny tsena 4-2,000 kW (5-2,800 hp). Ny tanjaky ny Perkins dia ny fahaizany mampifanaraka tsara ny motera mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa, ka izay no mahatonga ny vahaolana amin'ny motera atokisan'ny mpanamboatra lehibe mihoatra ny 1.000 amin'ny tsenan'ny indostria, fananganana, fambolena, fikirakirana fitaovana ary famokarana herinaratra. Ny fanampiana ny vokatra perkins manerantany dia omen'ny fizarana, faritra ary serivisy serivisy 4.000.
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (SDEC), miaraka amin'ny SAIC Motor Corporation Limited ho tompon'andraikitra lehibe ao aminy, dia orinasam-panjakana teknolojia avo lenta iray misahana ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny fanamboarana ny motera, ny motera ary ny andiana mpamorona, manana ivon-toerana ara-teknika haavo, tobim-piasana postdoctoral, tsipika famokarana mandeha ho azy manerantany ary rafitra fiantohana kalitao mifanaraka amin'ny fenitry ny fiara mandeha. Ilay teo aloha dia ny Shanghai Diesel Engine Factory izay natsangana tamin'ny 1947 ary namboarina ho orinasa nizara stock tamin'ny 1993 niaraka tamin'ny fizarana A sy B.
Ny fahatsiarovan-tena momba ny tontolo iainana Volvo Gen Set ny famoahana azy io dia mifanaraka amin'ny fenitra EURO II na EURO III & EPA. Ny motera diesel VOLVO PENTA dia manome herinaratra diesel injeniera izay novokarin'ilay soedoà VOLVO PENTA malaza eran-tany. Ny marika VOLVO dia natsangana tamin'ny taona 1927. Nandritra ny fotoana lava, ny marika matanjaka dia mifandraika amin'ireo soatoavina fototra telo ao aminy: ny kalitao, ny fiarovana ary ny fikolokoloana ny tontolo iainana. T
Amin'ny fampiasana firaisana ara-nofo avo lenta, mampihena ny tabataban'ny vavan'ny muffler.
Hookon mety, singa ho an'ny fitaterana mety, ny valizy napetraka fitaovana fananganana 4.
Endrika tsara tarehy, firafitra mirindra.
Ny andiam-panamafisam-peo misy setroka rehetra dia tsy azo esorina amin'ny farango manandratra ny masony eo an-tampony
Asa fanaovana hosodoko tsara kokoa, loko henjana mety amin'ny toetry ny toetrandro rehetra ary ialana amin'ny harafesina mandritra ny fotoana lava
Miorina kokoa amin'ny firafitra sy ny tanjaky ny tanjaka, ny muffle built-in haavon'ny tabataba ambany. sorohy ny vovoka sy ny fifohana sigara hafa.
Nanitatra ny faritry ny fidiran'ny rivotra sy ny fivoahana
Fandraisana an-tanana: mampiasa faribolana finday, 360 ° fihodin-tany, familiana miovaova, miantoka ny fiarovana azo antoka.
Fehin-kodiarana: fanidiana: miaraka amin'izay koa ny rafitra fametahana ShouYaoShi azo itokisana sy ny interface frein, azo antoka ny fiarovana ny fiara.
Bolster: hiantohana ny fiorenan'ny fiasan'ny kamio mahery, miaraka amin'ny fitaovana mpanohana mekanika na hydraulic efatra fotsiny.
Varavarana sy varavarankely: ny varavarana avaratra dia misy ivelan'ny varavarankely, varavarana, varavarana roa ho an'ny mpiasa miasa.